Umsantsa kwinethiwekhi ye-3G kunye ne-4G isivumela ukuba sihlolelwe | Iindaba zeGajethi
Isikhewu kuthungelwano lwe-3G kunye ne-4G sisivumela ukuba sihlolelwe
Ngaba uyabubona ubuso obukhathazekileyo analo lo mfazi xa wayethetha esitratweni ngefowuni yakhe ephathekayo? Le ayisiyiyo imeko, kodwa isondele kakhulu kwinto obuya kuba nayo ukuba uyifumene loo nto unokucinywa kunxibelelwano lwakho lwefowuni.
Iinethiwekhi ze-3G kunye ne-4G zikhawuleza kakhulu kunamanethiwekhi amadala e-2G, nangona kunjalo, kuvela ukuba azikhuselekanga ngakumbi. Njengoko kuxoxiwe kwinkomfa ye "Black Hat" malunga nokukhuseleka kwe-cyber okwenzeka eLas Vegas (United States), Iinethiwekhi ze-3G kunye ne-4G zibonisa ukuba sesichengeni okuvumela abasebenzisi ukuba babonwe.
1 Sijongene nantoni?
2 Ixesha elizayo lomnatha wenethiwekhi yeselfowuni
Ukufumanisa kuye kwenziwa liqela labaphandi kwaye akuvezi kuphela ubukho bolukaphulo-mthetho olubalulekileyo kodwa kunye ukungabinakwenzeka kokusombulula umngcipheko, elele ekubetheni iiprotocol kwaye ikwavumela ukulandelela isixhobo.
Xa iselfowuni yethu iqhagamshela kwinethiwekhi yomsebenzisi wefowuni, iphasiwedi esetyenzisiweyo isekwe kwikhawuntara kwinkqubo yenkampani, ejolise ekuqinisekiseni izixhobo nasekuthinteleni uhlaselo. Ngelishwa, umsantsa ufumene ubuxoki ngokuchanekileyo kwi- ukungqinisisa kunye nokungqinisisa isitshixo sokusilela.
Obu bungozi bunokusetyenziswa ngabagculeli abakhohlakeleyo ukubeka iliso kwiminxeba kunye nemiyalezo, kunye nokujonga indawo esikuyo isixhobo, nangona ingenako ukuguqula nayiphi na idatha, ngelixa i-geolocation iya kuncitshiswa kumgama weekhilomitha ezi-2.
Ixesha elizayo lomnatha wenethiwekhi yeselfowuni
Eyona nto ikhathaza kakhulu kukuba, kuba akukho sisombululo sifumanekayo, umsantsa ungenza indlela yawo kuthungelwano lwe5G isizukulwana esilandelayo.
Ukuphela konyaka, inethiwekhi ye-2G izakufa kumazwe afana ne-Australia, ngelixa eYurophu izakugcinwa ixesha elide (nokuba lide kunethungelwano lwe-3G) ukuqinisekisa ukungqinelana kwezixhobo ezindala.
El ikhalenda esemthethweni oku kulandelayo: ngo-2020 uthungelwano lwe-3G luza kucinywa kwaye ngo-2025 uthungelwano lwe-2G luza kuvalwa, ngelixa ukusetyenziswa kwezixhobo ezinonxibelelwano lwe-4G kuphakanyiswa kwaye uthungelwano lwe-5G lusasazwa lukhuseleko olupheleleyo, njengoko sele yabona, ayikaqinisekiswa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » Isikhewu kuthungelwano lwe-3G kunye ne-4G sisivumela ukuba sihlolelwe
Kunyaka kamva, amabali abhengeza impumelelo enkulu ye-Instagram
I-Samsung Pay ngokuchasene nabakhuphisana nayo, ubuso ngobuso ne-Apple Pay kunye ne-Android Pay